Testosterone propionate propionate: faa'iidooyinka iyo saameynta daawooyinka ay tahay inaad ogaato
Testosterone propionate propionate: faa'iidooyinka iyo saameynaha ay tahay inaad ogaato!
/blog/Trenbolone/Testosterone propionate propionate: faa'iidooyinka iyo saameynaha ay tahay inaad ogaato!
Posted on 11 / 24 / 2017 by 阿斯劳 ku qoray Trenbolone.
Testosterone propionate budada: faa'iidooyinka iyo waxyeellooyinka ay tahay inaad ogaato!
waa maxay Budada testosterone propionate?
Sidii aan ku sheegnay marinkii hore, Testosterone propionate budada ceyriinka waa materialof testosterone propionate ceyriin ah, nooc ka mid ah budada cad, si loo sameeyo daawada la dhammeeyo ee testosterone propionate. abuurista, cypionate, iyo sustanon heerkulka qaarkood. Driven Testosterone propionate waxay leedahay saameyn gaar ah oo korriin ah: waxay kicisaa horumarinta iyo shaqada xubnaha taranka dibadda, prostate, jeexjeexyada jilicsan, iyo sare sifooyinka jinsiga ragga (codka, timaha). Waxay ka qaybqaadataa sameynta dastuurka jirka iyo dabeecada galmada ee ragga, waxay kicisaa libido iyo awoodda, waxayna kicisaa fermatogenesis. Waxay yareysaa wax soo saarka luteotrophic iyo follicle-hormone stimulating hormone.
Faa'iidooyinka baaritaanka testosterone ee ragga:
Sida aynu wada ognahay, Testosterone Propionate badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo Low testosterone. Ninka qaba dhibco daran ee heerarka testosterone wuxuu u baahan yahay daaweyn degdeg ah. Taasi waa halka ay ka faa'iideystaan ​​tijaabada testosterone ee ragga. Testosterone Propionate wuxuu u shaqeeyaa sidii uu ugu noolaan lahaa libido, tamartaada iyo noloshaada. Daaweynta testosterone ee ragga waxay hagaajin kartaa heerarka tamarta, hooseeya libido, iyo dhibaatooyinka kacsiga. Daaweynta testosterone waxay sidoo kale hagaajin kartaa sonkorta sonkorta ee sonkorowga. Iyada oo ay sabab u tahay aaladda yaryar, daawada testosterone propionate ayaa si fudud loo nuugo oo loo isticmaalo jirka, sida caadiga ah gudaha 24 ilaa saacadaha 36. Nasiib darro, sida ugu dhakhsaha badan ee shaqada u socota waa la tagay. Tani waa sababta ay takhaatiirta mararka qaarkood u tijaabiyaan daawooyinka testosterone bilawga ah ee loogu talagalay nin leh heerarka hooseeya ee testosterone.
Waa kuwan faa'iidooyinka kale ee la rabo ee tijaabinta testosterone ee ragga:
Waxaa jira laba arrimood oo suurtagal ah oo saameyn leh:
Horumarinta waxqabadka jireed / ciyaaraha (adkaysiga, xoogga, dib u soo kabashada dhaqso)
Horumarka jirka (murqaha isku dhafka, baruurta lumis)
Qaar ka mid ah saameynta testosterone ee la rabo in shakhsi laga yaabo in uu la kulmo inta lagu jiro mudada steroid, waxaa ka mid ah:
kordhinta maqaarka kollagen iyo macdanta lafaha. Collagen waa maadada dhismaha borotiinka ku salaysan oo ah unugyo isku xiran oo jirka oo dhan ah (isgoysyada, jibbaarada, naqaska, jilicsanaanta, xubnaha iyo lafaha).
kor u kiciyay kalsoonida
cod dheer (manly) cod
madoobaanta iyo adkaynta timaha jidhka
kordhinta heerarka IGF-1 iyo hormoonnada MGF (taas oo sidoo kale kor u qaadeysa muruqyada)
kororka hemoglobin (tirada unugyada dhiigga cas)
saameyn liddi ku-ool ah oo ku saabsan unugyada muruqyada iyadoo ay u dhaqmayaan sida anti-glucocorticoid
Faa'iidooyinka testosterone propionate ee haweenka:
Iyada oo cilmi baaris socota, bulshada caafimaadku waxay baraneysaa in testosterone ay ujeedo badan u leedahay, iyada oo laga bilaabo inta badan ee la fahmi karo ee la ogaadey galmada si ay u caawiso xakamaynta sonkorta dhiigga waxaana laga yaabaa inay sidoo kale leedahay saameynta daawada anticoagulant. Intaa waxaa dheer, doorka loo yaqaan 'testosterone' ee ku habboon dhisidda muruqyada iyo lafaha ayaa si gaar ah muhiim ugu ah haweenka la kulma xanuunada la xiriira da'da sida xuubka osteoporosis iyo cudurada wadnaha.
Sidoo kale waxaa jira qaar ka mid ah faa'iidooyinka kale ee testosterone propionate ee haweenka:
Hagaajinta jinsiga galmada, jawaab-celinta, riyooyinka, joogtaynta, iyo raaxada
Wuxuu hoos u dhigaa heerka LDL (xun) heerarka kolesteroolka
Waxay hagaajisaa wareegga dhiigga iyo unugyada dhiigga cas cas si looga hortago dhiig yari
Waxay xoojisaa lafaha waxayna ilaalisaa lafdhabarta
Waxay hagaajineysaa murqaha muruqa waxayna xitaa caawin kartaa in laga hortago dhibaatooyinka kaadiheysta
Yareynta ama joojinta calaamadaha menopause, oo ay ku jiraan nalalka kulul iyo dhididka habeenkii
Ciladaha miisaanka lumis iyo hagaajinta shaqooyinka dheef-shiid kiimikaadka
Waxay caawisaa xasuusta xasuusta iyo waxqabadka garashada
Wuxuu dhiirrigeliyaa qoto dheer, hurdo badan nasasho
Laakiin qaar badan oo ka mid ah steroids-ka dumarka isticmaala, kuma talineyno testosterone propionate-ka jirka, sababta oo ah waa dhif iyo naadir, hormoonnada ragga ee adag sida testosterone waxay ka dhigi karaan astaamaha lab aad u xoog badan
Waa maxay saameynaha daawada loo yaqaan 'testosterone propionate'?
Qaar badan oo ka mid ah ciyaartoyda ciyaaraha fudud ayaa ka cabanaya tijaabin tijaabo ah oo loo yaqaan 'testosterone propionate', xanaaq iyo guduudasho meeshii lagu muday. Iyo sida cirbadaha badanaa lagu dhajiyo, ka-faa'iideysiga gardarrada waa la ogaadaa.
Propionate si fudud ayaa loo dhadhamiyaa oo si fudud ayaa loogu beddelaa estrogen, sidaa darteed waxyaalahan oo kale way dhici karaan (testosterone propionate side effects are):
Maqaarka laftirka ah ama finanka (finan)
Cadaadiska dhiigga oo korodhay
Ginecomastia (aka Gyno / Moodle Bitch)
Dhimista timaha (ama koritaanka firfircoon ee jidhka) waxay sidoo kale ku xiran tahay astaamaha qof ee shakhsiga.
Hoosudhaca testosterone dabiiciga ah, laakiin badanaa waxaa dib loo soo celiyaa dhammaadka koorsada bilaha 2-3.
Hawlgalkan, daawadani haddii la qaato maskaxda (oo dhexdhexaad ah), ma saameynayso xubnaha gudaha (beerka, kelyaha, iwm.
HGH-dhiska jirka: Sida loo qaato loona daro HGH? Cetilistat budada cayriin miisaan lumis